KingCom Car Charger 5.1A &3USB ports_Gold: သက်သာသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် "ရုပ်သံဆက်စပ်ပစ္စည်းများ" ကို အွန်လိုင်းတွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ | Shop.com.mm
More "ယာဉ်ပစ္စည်းများ" from KingCom
ကုန်ပစ္စည်းKingCom Car Charger 5.1A &3USB ports_Goldအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်
KingCom၏ charger ကို အားပြည့်လွန်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံး circuit ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကြာရှည်ခံပါသည်။ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm Online Shopping Mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
အချက်အလက်များKingCom Car Charger 5.1A &3USB ports_Gold
အမှတ်ပေးချက် နှင့််ဝေဖန်အကြံပြုစာ KingCom Car Charger 5.1A &3USB ports_Gold
မှ aung y.
This charger is very useful for every car. I also use this charger in my car because it's safe and easy way to use. If you buy, you may also like this charger. You can use3types of electronic things because it has3USB ports.